CID -da Dutchtown
Xarunta CID-da ee Dutchtown
Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown waa degmo-hoosaad siyaasadeed oo ururiya qiimeyn canshuur gaar ah oo ku saabsan guryaha magaaladeed gudaheeda xuduudaha. Canshuurta yar waxaa loo isticmaalaa hagaajinta degmada gudaheeda ee ku saabsan dayactirka, qurxinta, amniga, amniga, iyo inbadan.
Iyada oo gacan laga helayo mutadawiciin badan oo hufan iyo hoggaamiyeyaasha bulshada, Xarunta CID-da ee Dutchtown waxaa si rasmi ah u aasaasay Magaalada St. Louis Sharciga 70559 bishii Juun 9th, 2017, oo dhaqan gashay 21-kii Luulyo, 2017. Xarunta CID-da ee Dutchtown waxaa lagu abuuray wareejinta iyo oggolaanshaha codsi in ka badan 51% milkiilayaasha guryaha ku dhex jira CID-da raadkeeda.
CID-da waxaa haga a Board of Directors oo ka kooban dadka deegaanka, milkiilayaasha ganacsiga, iyo milkiilayaasha guryaha ee ku dhex jira raadadka CID-da. Kulamada guddiga dadweynaha waxaa la qabtaa Talaadada afraad ee bil kasta. Booqo Kalandarka Dutchtown ama DutchtownSTL bogga Facebook si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan waqtiyada shirarka iyo goobaha.
Booqo bogga dukumentiyada waayo, daqiiqadaha kulanka, ogeysiisyo, ajandayaasha, Iyo wararka.
Gudigu wuxuu talo ka helayaa Guddiyada Dutchtown ku saabsan arrimaha sida amniga, dallacaadda, iyo hantida jirka. Guddiyadu way u furan yihiin dhammaan, waxayna ka shaqeeyaan arrimaha gudaha iyo ka baxsan raadadka CID. Wax badan ka baro ka mid noqoshada guddi.
Dhacdooyinka CID-da ee soo socda Dhacdooyin badan at dutchtownstl.org/calendar
Dhacdo on Janaayo 18th @ 6:00 pm
info More on Shirka Gudiga Ururka Dutchtown
Dhacdo on Janaayo 20th @ 6:00 pm
info More on Shirka Gudiga Naqshadeynta Dutchtown
Dhacdo on Janaayo 22-keeda @ 11:00 subaxnimo
info More on Meramec Magic
Dhacdo on Janaayo 25th @ 5:30 pm
info More on Shirka Gudiga Maamulka CID ee Dutchtown
Eeg dhammaan dhacdooyinka CID
Wararka CID ee Dutchtown Ka raadi cusboonaysiinta CID-da Dutchtownstl.org/wararka
Dutchtown Xagaaga Vibes
Posted on Waxaa laga yaabaa 15th, 2021
La wadaag email
Keydso taariikhda! Nagala soo qaybgal Downtown Dutchtown on Sabtida, Juun 5th waayo, Dutchtown Xagaaga Vibes, xaflad xaafadeed iyo dhacdo bulsho! Dutchtown Summer Vibes waxaa soo bandhigaya Caymiska Crawford-Butz.
Akhriso inta ka hartay "Dutchtown Summer Vibes"
Dhisida Ganacsi Ka Wanaagsan
Adeegyada Sharciga ee Bariga Missouri waxay martigalisaa siminaarro taxane ah bishii Maajo si ay uga caawiso ganacsiyada inay xoojiyaan qorshayaashooda ganacsi, dalbadaan amaahda, iyo inay xiriir la yeeshaan bangiyada Kulamadan oo ah hal saac, oo lagu soo bandhigo Zoom, waa u bilaash milkiilayaasha ganacsiyada waxayna dhacaan Arbacad kasta inta lagu jiro bisha. Fasallada waxaa lagu soo bandhigaa iyadoo lala kaashanayo Xarunta Ganacsiga Haweenka ee Ururka Magaalada iyo Maamulka Ganacsiga Yaryar.
Akhriso inta ka hartay “Dhisida Ganacsi Fiican”
Maalinta Jacaylka ee Dutchtown
Maalinta Jacaylka, dukaanka Dutchtown oo ka hel waxyaabo u gaar ah gacaliyahaaga! Intaas waxaa sii dheer, waxaad fursad u heli doontaa inaad ku guuleysato abaalmarinno aad u wanaagsan oo ka socda ganacsatada xaafaddayada! Akhriso si aad ubarato sida aad ugu guuleysan karto, oo wax badan uga ogaato dhacdooyinka gaarka ah ee dhacaya maalinta ka horreysa Jacaylka.
Akhriso inta ka hartay “Maalinta Jacaylka ee Dutchtown”
Warbixinta Sannadlaha ah ee Dutchtown CID 2020
Degmada horumarinta bulshada ee Dutchtown ayaa soo saartay Warbixinta sanadlaha ee 2020. Warbixinta ayaa dabooleysa laba iyo tobanka bilood ee ku eg 30-ka Juun, 2020.
Akhriso inta ka hartay "Dutchtown CID 2020 Report"
Raadi Dutchtown CID
Inbadan oo ku saabsan Dutchtown CID